Mpikatroka Singapaoreana voasazy higadra 16 andro an-tranomaizina taorian’ny fampiantranoana lahatsarin’antsafa nifanaovana tamin’i Lee Wong tanora mpitarika ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2019 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny English, 简体中文, Swahili, македонски, Français, Español, Italiano, English
Nosoratan'i Holmes Chan ity lahatsoratra manaraka ity ary navoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 21 Febroary 2019. Naverina navoaka eto amin'ny Global Voices araka ny fiaraha-miasa fifampizarana votoaty ny lahatsoratra nasiam-panitsiana.
Mpikatroka fantatra amin'ny fanentanany mampiroborobo ny zon'ireo mpiasa mpifindramonina, ny fahalalahana miteny ao Singapaoro, ary ny fanavaozana ny lalàna ao amin'ny firenena momba ny fanagadrana sy ny fanamelohana ho faty i Wham .
Tamin'ny volana lasa teo, voaheloka noho ny famorian'olona tsy ara-dalàna tamin'ny resadresaka izay notontosainy tamin'ny lohahevitra mikasika ny “tsy fankatoavana sivily sy ny hetsika sosialy” tamin'ny volana Novambra 2016 i Wham, izay nahitana an'i Joshua Wong sy ireo mpikatroky ny fampitam-baovao ao an-toerana. Nilaza tamin'i Wham ny polisy fa nila fahazoan-dàlana izy mba hanatontosany ny resadresaka tamin'i Wong saingy tsy nisy izany.
Nitatitra ny fampahalalam-baovao Singapaoreana fa nisafidy ny tsy handoa ny lamandy i Wham, ary nanameloka azy higadra an-tranomaizina 16 andro noho ny tsy fandoavany izany ny fitsarana. Ankoatra ny famorian'olona tsy ara-dalàna dia voaheloka ihany koa noho ny tsy nanaovany sonia ny fanambaran'ny vavolombelon'ny polisy i Wham. Nilaza izy tamin'izay fotoana izay fa nisafidy ny tsy hanao sonia satria tsy nomena ny dika mitovy.
Mikasa ny hampakatra ny fanapahan-kevitry ny mpitsara i Wham. Noafahana vonjimaika izy rehefa nandoa antoka mitentina 8.000 dolara Singapaoreana (5.906 $ amerikana), araka ny tatitry ny fampitam-baovao.
Nohadihadian'ny polisy nandritra ny 45 minitra i Wham taorian'ny zava-nitranga. Voaheloka ihany izy tamin'ny volana Novambra 2017, saingy tsy notsaraina ny raharaha raha tsy tamin'ny volana Janoary 2019.
Niady hevitra mikasika ny fitantaran'ny mpiampanga ny zava-nitranga ihany koa i Han. Araka ny Fantsona NewsAsia, nanambara ny mpiampanga fa “an'arivony” no nasaina tao amin'ny fivoriana ary olona miisa 366 no nilaza fa liana tamin'ny fanatrehana izany.